Vaovao - Zava-mahaliana momba ny taombaovao sinoa
1, Ny andro voalohany tamin'ny volana volana voalohany dia tsy nantsoina hoe Fetiben'ny Lohataona tamin'ny andro taloha, fa Andro Taom-baovao.
2, amin'ny tantaran'ny sinoa, ny teny hoe "Fetiben'ny Lohataona" dia tsy festival, fa fanondroana manokana ny "Fanombohan'ny Lohataona" amin'ny 24 voambolana masoandro.
3, Ny Fetiben'ny Lohataona amin'ny ankapobeny dia manondro ny fiandohan'ny taonan'ny volana sinoa, izany hoe ny andro voalohany amin'ny volana volana voalohany. Ny fetiben'ny lohataona sinoa amin'ny heviny malalaka dia manondro ny andro fahavalo amin'ny volana faharoa ambin'ny folo, na ny volana faha-12 ambin'ny folo, hatramin'ny 23, 24, hatramin'ny andro fahadimy ambin'ny folon'ny volana voalohany..
4 ， Na dia fomba fanao amin'ny ankapobeny aza ny Fetin'ny Lohataona, fa ny atin'ny fankalazana kosa tsy mitovy isan'andro. Hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito, dia ny andron'ny akoho, ny andron'ny alika, ny andron'ny kisoa, ny andro amin'ny ondry, ny andro an'ny omby, ny andro soavaly ary ny andro ilay lehilahy.
5 ， Ho fanampin'i Shina, misy firenena maro hafa eto amin'izao tontolo izao mankalaza ny Taom-baovao toy ny fialantsasatra ofisialy. Ireto avy ireo: Korea Atsimo, Korea Avaratra, Vietnam, Malezia, Singapore, Indonezia, Maorisy, Myanmar, ary Brunei.